Umhlahlandlela Wabaqalayo beLinux | Kusuka kuLinux
Umhlahlandlela Wabaqalayo we-Linux
Abantu abaningi bahlose ukuzama iLinux, kepha bazizwe bekhungathekile ngoba bacabanga ukuthi kuyinto eyinkimbinkimbi kabi futhi eyinkimbinkimbi. Lokhu akufani nalokhu. Ukufakazela lokhu, sithuthukise izifundo ezi-6 ze- "newbies" ngenhloso yokuthi noma ngubani angakwazi ukufaka iLinux futhi ayilungele ".
1 Isifundo 1: Kungani ufake i-Linux?
2 Isifundo 2: Ukukhetha Isakhiwo Esilungile
3 Isifundo 3: Faka i-Linux
4 Isifundo 4: Yini okufanele uyenze ngemuva kokufaka ...
5 Isifundo 5: Faka Izicelo
6 Isifundo 6: Ungaluthola Kanjani Futhi Ungaluthola Kanjani
Isifundo 1: Kungani ufake i-Linux?
Umbuzo unengqondo kakhulu uma siwuguqula: kungani ungazami iLinux? I-Android isuselwe kuLinux, iningi lamaseva omhlaba asebenzisa iLinux, ibuye isetshenziswe yiNASA neCERN. Iqiniso ukuthi sesivele sisebenzisa iLinux singanakile (i-Android) futhi ochwepheshe bakhetha ukusebenzisa iLinux kulawo macala abucayi lapho kudingeka khona ukuba nohlelo oluzinzile, oluphephile nolusebenzayo.
Ngakho-ke kungani singasebenzisi i-Linux kuma-PC ethu wedeskithophu noma ezincwadini zethu / ezincwadini zethu? Ilula, ngoba iWindows, ngenxa yezivumelwano ezahlukahlukene nabakhiqizi bezingxenyekazi zekhompiyutha, iza ifakwa ngokuzenzakalela futhi sonke siyayijwayela. Manje lokho kusho ukuthi kungcono kuneLinux? Hhayi, cha.
En lo mhlahlandlela Sichaza ezinye zezizathu zokuthi kungani kufanele uzame i-Linux.
Isifundo 2: Ukukhetha Isakhiwo Esilungile
Lapho usuthathe isinqumo sokudubula iLinux, udinga ukuthola ukusatshalaliswa okufanelekile kwakho. Angazi ukuthi ukwabiwa kuyini? Ngabe udinga usizo ngokukhetha eyodwa? Ngakho-ke, lesi sifundo Kwenzelwe wena.
Isifundo 3: Faka i-Linux
Ngaphambi kwalokho, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kungenzeka ukuthi uvivinye ukusatshalaliswa kwe-Linux ozikhetheleyo ngaphandle kokukufaka kwi-hard drive futhi, ngale ndlela, hlola ukuhambisana kwalokhu kusatshalaliswa nehadiwe yomshini wakho, ngaphandle kokusho ukususwa kolwazi ngengozi. Ngemininingwane engaphezulu ngale ndaba, ngiphakamisa kakhulu ukuthi ngifunde i- isifundo esedlule.
Kokubili ukuvivinya nokufaka i-Linux kuyadingeka ukwenza izinyathelo ezithile zangaphambilini (njengokulungiselela i-UEFI / BIOS ukuqala nge-CD / DVD / USB). Nakulokhu futhi, i- isifundo 2 Kuzokusiza ukuxazulula konke ukungabaza kwakho ngale ndaba, mhlawumbe okunye okunzima kakhulu ku- "newbies" yize kungenzima njengoba kubonakala ekuqaleni.
Ekugcineni, kuza inqubo yokufaka yokusabalalisa okukhethiwe. Njengesincomo esijwayelekile, ngiphakamisa ukuthi ngibheke amavidiyo ku- Youtube ezibonisa ukuthi ungayifaka kanjani "igxathu negxathu" ekusatshalalisweni kwe-Linux okuthandayo. Kule bhulogi uzothola eziningana zalezi zinkombandlela zokusabalalisa okulandelayo: Ubuntu, I-Linux Mint, Debian, Fedora, I-Gentoo.
Impela, labo abenqenayo ngokwanele bangakhetha ukwazi ukuthenga amakhompyutha ane-Linux efakwe kuqala. 🙂
Isifundo 4: Yini okufanele uyenze ngemuva kokufaka ...
Manje njengoba usufake ukusatshalaliswa kwakho kweLinux, sekuyisikhathi sokwenza ngezifiso. Ngokungafani neWindows, kuLinux ungaguqula futhi ulungiselele KONKE ngokuya ngokunambitheka nezidingo zalowo nalowo. Kule bhulogi uzothola imihlahlandlela eminingana yokwazi "ukuthi wenzeni ngemuva kokufaka ..." Ubuntu, I-Linux Mint , Debian, Fedora o Slackware, okunye ukusatshalaliswa okuthandwa kakhulu.
Isifundo 5: Faka Izicelo
Ukusatshalaliswa kweLinux kuza nephakheji yohlelo lokusebenza oluzenzakalelayo. Kodwa-ke, lokhu kaningi akwanele. Ku- lesi sifundo Bayachazwa ngezindlela ezahlukahlukene zokufaka izinhlelo zokusebenza ezintsha zokusebenzisa izinhlelo zeWindows kuLinux. Ngokufanayo, uhlu lwezinye izindlela zomdabu ezinhlelweni ezisetshenziswa kakhulu ku-Windows lufakiwe.
Isifundo 6: Ungaluthola Kanjani Futhi Ungaluthola Kanjani
Indawo yokuqala yesethenjwa lapho uxazulula inkinga yi- Wiki (Ikhasi elifana ne-Wikipedia, elenziwe ngumphakathi) noma Izinkundla Zokusekela zokusabalalisa okusebenzisayo. Ngokuya ngokuthandwa kokusatshalaliswa, eziningana zazo zifaka imibhalo ngeSpanishi. Phakathi kwama-wikis abaluleke kakhulu nezinkundla zokusekelwa yilezo ze Ubuntu, I-Linux Mint, Debian, Fedora, I-Arch Linux, phakathi kwabanye. Le blog nayo inayo I ukukusiza ukuxazulula izinkinga ezithile kanye ne Umphakathi we-G + ivulekile kakhulu futhi izimisele ukusebenzisana. Enye indawo yokuthola usizo imiphakathi yesoftware yamahhala yezwe / isifunda sakho.
Okokugcina, kufanelekile ukusho ukuthi kubalulekile hhayi kuphela ukwazi ukuthi ungalucela kuphi usizo kepha nokuthi ungalucela kanjani. Ukwenza lokhu, kuyadingeka ukuthi ube nolwazi oluncane lwezinkinga ezithile, njengokwazi ukuthi amafayela agcinwe kuphi. log amafayela (amafayela we-log) nokuthi yiluphi ulwazi umuntu alugcinayo, kanye nokwenza kahle ezinye imiyalo eyisisekelo ukukhomba i-hardware kanye / noma ukumiswa kwesoftware okusetshenzisiwe. Isamba salolu lwazi sizosiza umsebenzi walabo abafuna ukukusiza ngoba bazokwazi ukuba nomqondo ocacile hhayi kuphela wenkinga uqobo kodwa nangokucushwa kohlelo lwakho kanye nehardware esetshenzisiwe (okungaba, ekugcineni , imbangela yenkinga.).